Mashiinka Goynta Fiber Laser - Goldenlaser
Mashiinka goynta leysarka Fiber waa aalad la awoodi karo, fududahay in la isticmaalo, iyo qalab badan oo loo isticmaalo goynta xawaaraha sare ee taarikada birta iyo dhuumaha. Waxay kaa caawin kartaa inaad bilowdo shirkad cusub oo bilow ah ama kordhinaysa faa'iidada shirkaddaada si wanaagsan u dhisan.
Mashiinkayaga mashiinka goynta fiber-ka wuxuu ku haboon yahay jarista birta kaarboonka, birta birta ah, birta daawaha ah, birta guga, aluminium, naxaas, naxaas, bir birta, iwm. dhuumaha, baabuurta, qalabka jimicsiga, mashiinada beeraha iyo dhirta, makiinadaha cuntada, xayeysiinta, armaajooyinka korantada, wiishashka iyo warshadaha kale.
Mashiinka goynta leysarka fiber-ka cabbirka ugu yar P1260A, oo leh nidaam quudin gaar ah oo si gaar ah u wada. Xoogga saar goynta tuubada cabbirka yar.
Mashiinka goynta tuubada waxqabadka sare ee tuubada oo si otomaatig ah loo dejinayo iyo loo dejinayo. Goynta wareegsan, leydi, afargeesle ah iyo qaabab kale oo tuubbo ah si loo qanciyo baahiyo badan oo tuubbo tuubbo ah.
Mashiinkaan birta otomaatiga ah ee otomaatiga ah ee otomaatigga ah waxaa lagu qalabeeyaa koronto-gacmeed iyo xayndaab buuxa oo lagu soo saaro qaybo tayo sare leh oo leh qaabab iyo cabbirro kala duwan.
Gaar ahaan tuubbada birta ee goynta leysku wareegga, afargeeska, leydilaalka, saddexagalka, oval, tuubbada dhexda iyo tuubbada & tuubbada qaabaysan. Ballaca tuubada waxay noqon kartaa 20-200mm, dherer 8m.
Qaab No.: GF-2560JH / GF-2580JH
6000W 8000W Fiber Laser Goynta Mashiinka
Awood sare iyo qaab balaaran magaabay laser. BECKHOFF kontaroolaha CNC. 2.5m × 6m, 2.5m × 8m aagga goynta. Dhumucdiisuna goynta ugu badnaan 30mm CS, 16mm SS
Qaab No.: GF-1530JH
Mashiinka Mashiinka Goynta Fiber Laser Buuxda oo Xiran oo sita Beddelkiisa
Mashiinka goynta leysarka fiber Naqshad xayndaab IPG / nLIGHT 2000W dhaliyaha leysarka fiber. Iska yaree max 8mm ahama, 1 ...